Kenya: saddex cisho oo baroordiiq ah - BBC News Somali
Kenya: saddex cisho oo baroordiiq ah
Dalka Kenya waxa ka bilaabmay saddex cisho oo baroordiiq ah oo loo samaynayo dadkii dhimashada iyo waxyeelladu ka soo gaadhay weerarkii rugta ganacsiga ee Westgate ee magaalada Nairobi ay ku qaadeen islaamiyiinta xagjirka ahi, shilkaasi oo taagnaa muddo afar cisho ah.
Image caption Baroordiiqda Kenya
Khudbad uu xalay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ka jeediyey telifishannada dalkaasi, waxa uu ku sheegay in ilaa 67 qof oo ku dhintay hawlgalladii weerarkaasi, ay ku jiraan lix ka tirsanaa ciidamada nabadgelyada. Waxa kale oo uu sheegay ilaa shan ka mid ah dableydii soo weerartay xarunta Westgate in la diley, 11 kalena la qabtay. Waxanu xalay ku dhawaaqay madaxweynuhu in la soo gabagabeeyey hawlgalladii ku saabsanaa qabashada iyo badbaadinta xaruntii Westgate, lagana sifeeyey dableydii xagjirka ahayd ee soo weerartay ee qabsatay rugtaas.
Ilaa iyo hadda waxa lagu jiraa hawlihii sifaynta xarunta, halkaasi oo laga soo faqayo meydadkii ku hadhay. waxa la filayaa inay kor u sii kacdo tirada daka meydadka ah ee la helo, iyo kuwa u dhintay dhaawacii soo gaadhay. Welina waxa la rumaysan yahay in halkaasi ay ku sii xanniban yihiin meydad kale oo ku aasan, ayna ka mid yihiin xubno ka tirsanaa dabelydoo weerarka soo qaadday ee la laayey.Waxa dagaalladii halkaas ka socdey ku dumey saddexdii dabaq ee ugu korreeyey dhismahaasi xarunta, lana fili karo inay weli jiraan dad ku sii hoos aasan.
Khariidadda rugtii ganacsiga ee Westgate ee Nairobi
Image caption Khariidadda Rugta Westgate